International Kuteerera magweta muNetherlands - Law & More
Chikwereti Kuunganidza Gweta
Adhaizita yeHofisi Yemhuri
Intellectual Property (IP) Gweta
Kubatanidzwa & Kuwana
Unyanzvi & Charity Nheyo
Real Estate Gweta
Eurasia & CIS Tafura
Netherlands Dutch Bhawa Association
World Law Mubatanidzwa
Kunyoresa Pamutemo Nzvimbo
Nyora zvaunotsvaga wobva wadzvanya pinda:
Munharaunda yanhasi, kukosha kwekuteerera kwave kuwedzera kukosha. Kuteerana kunotora kubva muchiito cheChirungu 'kutevedzera' uye zvinoreva 'teerera kana kugara'. Kubva pakuona zviri pamutemo, kutevedza zvinoreva kutevedzera mitemo nemirau inoshanda. Izvi zvakakosha kwazvo kune yega kambani uye institution. Kana iyo inoshanda mirau nemirau zvikasateedzerwa, matanho anogona kumisikidzwa nehurumende. Izvi zvinosiyana kubva pakubhadharisa faindi kana mubhadharo wechirango kusvika pakutorerwa rezinesi kana kutanga kwekupomerwa mhosva Kunyangwe kutevedza kunogona kuenderana nemitemo yese zviripo nemirau, mumakore achangopfuura kuteedzera kwakanyanya kuita basa mumutemo wezvemari nemutemo wepachivande.
Kubvumirana mukati memutemo wekuvanzika kwawedzera kukosha mumakore apfuura. Izvi zvinonyanya kukonzerwa neGeneral Data Protection Regulation (GDPR), iyo yakatanga kushanda musi wa25 Chivabvu 2018. Kubva pamutemo uyu, masangano anofanirwa kutevedzera mitemo yakaoma uye vagari vane kodzero dzakawandisa pamusoro pevo ruzivo. Muchidimbu, GDPR inoshanda kana data rako pachako rakagadziriswa nesangano. Yako yedata inoreva chero ruzivo rwune chekuita newakazvizivikanwa kana munhu anozivikanwa munhu wechisikigo. Izvi zvinoreva kuti ruzivo urwu rune chekuita zvakananga kune mumwe munhu kana kuti runogona kurondedzerwa zvakananga kumunhu iyeye. Chinenge sangano rose rine kubata kubudiswa pachavo mashoko. Izvi zvatova izvo, semuenzaniso, kana iyo yekubhadhara kwekutengesa yakagadziriswa kana iyo data yemutengi ichengetwa Izvi zvinodaro nekuti kugadziriswa kwedata remunhu kune chekuita nevatengi pamwe nevashandi vekambani. Zvakare, chisungo chekutevera neGDPR inoshanda kumakambani pamwe nekumasangano emagariro akaita sekirabhu yemitambo kana nheyo. Chikero cheGDPR saka chiri kure kwazvo kusvika. Iyo Yega Dhairemendi Chiremera isangano rekutarisva ine chekuita maererano nekutevera neGDPR. Kana iyo sangano isingateereri, iyo Dhipatimendi reDatha reChisimba rinogona kumisikidza faindi, pakati pezvimwe zvinhu. Aya mafaindi anogona kumhanya achienda kuzviuru zvemadhora. Kubvumirana neGDPR saka kwakakosha pasangano rega rega.
Ithimba re Law & More inova nechokwadi chekuti iwe unoenderana nemitemo yese nemirairo. Nyanzvi dzedu dzinozvinyudza mumubatanidzwa wako, ongorora kuti ndeapi mutemo nemirairo zvinoshanda kusangano rako uyezve wozotora chirongwa chekuona kuti unozvitevedzera nemirairo iyi pamativi ese. Uye zvakare, nyanzvi dzedu dzinogona kuitawo sevatariri ekuteerera iwe. Hazvina kungodiwa kuti uve nechokwadi chekuti unoenderana nemitemo uye mirau inoshanda, zvakakoshawo kuti iwe urambe uchitevedza nekukurumidza kuchinja kwemitemo nemirairo. Law & More inonyatsoteedzera zvese zviitiko uye inopindura kwavari nekukurumidza. Nekuda kweizvozvo, tinogona kuvimbisa kuti yako sangano iri uye icharamba inoenderana munguva inotevera.